Somaliland.Org » Maxaa keenay hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland, sideese diblomasiyeenteenu u dhaqantaa.
OPINIONMaxaa keenay hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland, sideese diblomasiyeenteenu u dhaqantaa.
January 28th, 2009 Comments Off Maxaa keenay hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland, sideese diblomasiyeenteenu u dhaqantaa.
Waxaa in mudo ah dareen badani ka jirey hoos u dhaca weyn ee ku yimi horumarinta qaddiyada Somaliland ee ku wajahan dibada. Arrintan oo aad u soo shaac baxday kadib booqashadii uu Xogyaha Xibiga KULMIYE, Axmed Silanyo ku tegey wadanka Kenya. Waxa Kenya cadaysay in ay wax Somaliland khuseeya in lagala hadlo ay ugu dambasysey wasiiradii hore ee Arrimaha dibeda Adna Adan.
In kasta oo ay jireen safarro aad u tira badan oo ay gala bixinayey dunida “Somaliland’s duo ministers” Labada wasiir ee Somaliland, Wasiirka maaliyada, “Cawil” iyo wasiirka arrimaha debeda “Cabdulaahi Yare”. Waxaa kal hore mar uu Madaxweynuhu u khudbadaynayey jaaliyada Somaliland ee Washington DC (carriga Maraykanka) uu aad ugu nuuxnuuxsaday sida ay labadaa wasiir hadh iyo habeen ugu tafaxaydanyihiin horumarinta qadiyada Somaliland. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya dhibaatada labadaa wasiir kasoo gaadhey shaqada horumarinta qadiyada Somaliland waxa uu xusuay in “Cawil lagu budheeyey Kenya oo uu dhaqtar arrintaa daraadeed u yaalo.” Wuxuu kaloo Madaxweyneheenu xusay in “Cawil iyo Cabdulaahi yareba, waa sida uu u dhigaye, ay ku ambadeen mar diyaarad waa kaga dhacay Afrikada dhexe, ka dibna ay qaateen huuri iyagaoo ku sii jeeda waddanka Gambia.”
Waxaa hadaba is weydiin mudan, hadii labada madaale ay goor iyo alayl u tafaxaydan yihiin kana shaqaynayaan horumarinta qadiyada Somaliland, maxaa keenay hoos u dhaca iyo horumar la’aanta qadiyada Somaliland. Waxaan u sababaynayaa hoos u dhaca ku yimi horumarinta qadiyada Somaliland arrimaha kala ah.
1. Ma cada cida qabata shaqada arrimaha dibeda ee Somaliland (Cawil/Cabdulaahi Yare: Situation of role mix up)
2. Anshax la’aan iyo asluub xumo loo isticmaalay safarada dibeda (luck of etiquette and professionalism when within Somaliland or other entities )
3. Qalaanqal iyo dagaal ka dex oogan hogaanka iyo talada UDUB (chaos within the UDUB leadership)
4. UDUB oo had iyo gooraale ku foogan mucaaridka gaar ahaan KULMIYE (lost of focus)
· Ma cada cida qabata shaqada arrimaha dibeda ee Somaliland (situation of “role mix up”)
Aan ku bilownee, yaa qabta shaqada arrimaha dibada ee Somaliland? Waxaa dad badani aaminsanyihiin in Cawil dembaabo labada wasaaradoodba, Maaliyada iyo Arrimaha Dibada. Hadii aynu maqalay in Madaxweyna ku xigeenka Kenya u aa iminsanyahay’Adna inay tahay wasiirka arrimaha debeda, ha fogaysan. Waayo cid kaleba dabadeed kama arag Somaliland. Beynow, muxuu Cawil hadaa ka doonaa Kenya? Bal adba?
Sandkii la soo dhaafay inta jawhariga ah waxaa wasiirka arrimaha debedu u baxay sadex safar. 1. Janaayo 08. USA oo uu ku weheliyey Madaxweynaha. 2. Octobar 08, oo uu yimi UK. 3. December 08, Djibouti (with Riyale).. Halka Cawilna sameeyey afar socdaal. 1. Janaayo 08, Kenya, 2. December 08 Djibouti (with Riyale), 3. September 08, France (with Riyale) 4. Janaayo 09 Jabuti. Waxaa iyaduna sugan in inaan wasiirka arrimha dibada iyo cid kale toonihi haba yaraatee la soo qaadin safaradan Barlamaanka.
Safarkii uu Riyaale ku tegey France, sanadkii lasoo dhaafay, wasiirka arrimaha debeda iyo safiirka France inoo qaabilsan Mud: Fagadhe, midna lama socon. Waxaa safarka fagadhe loo sheegay laba habeen ka hor, fiisana wuu u baahnaa. Ku darso oo safarakii ugu dambeeyey ee Jabaouti lagu tegey waxaa hogaaminayey Cawil. Hadii ay hawlahanoo dhami yihiin hawlo arrimo debedeed khuseeya, maxaa wasiirka arrimaha debeda meesha ka saaray, maxaase Cawil oo wasaarada maaliyada jooga, hogaankeeda siiyey? Taasi waxay cadaynaysaa inuu jiro “role mix up”. Mise tollow Cabdullahi Yare waa “xoolo huni” oo dabeer dabran laguma halaysto?
Sannadkii hore markuu madaxweynuhu booqday carriga Maraykanka waxaa Cawil joogey Kenya mudo bil iyo badh ku dhow iyadoo ay dawladu shaacisay inuu ku maqanyahay shaqo dawladeed. Waxay kaloo lawada ogyahay in koox budh cad ahi ay lug ka jebiyeen wasiiraka isagoo ka shaqaynaya qadiyada Somaliland (go figure). Safarkaa kii xigey wuxu hadana Cawil u baxay Jabuti, iyadoo dawladu sheegtay inuu kala soo xaajoodey arrimo ay dawladu ku sifaysay xidhiidhka labada waddan. Waxay taasi inoo cadaynaysaa in Wasaarada arrimaha dibada hawsheedii ay tahay mid in labada wasiir u dhexaysa oo aan ku magacawnayn warii